Archive du 20180210
Tranon-dRavalomanana eny Faravohitra Hotapahina koa ny herinaratra ?
Tsy ho vita mihitsy ny tantara eo amin’ ny fanjakana sy Marc Ravalomanana izay iharan’ny antsojay efa ho isan`andro.
Filoha sy praiminisitra Sahirana mifehy mpamosavy malemy
Soa lavo hahay hamindra, hoy ny oha-pitenenana izay, saingy raha ny zava-manjo sy ataon’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, sy ny praiminisitra no dinihina dia, asa, difotry ny dosie misavovona dinihina isan’andro ve sa tena efa diso matihanina kosa ireo mpamosavy malemy ao an-dapa amin’ny fampihesonana azy mirahalahy ireto ka dia nihesona hatramin’ny mpampihesona?
HCC Ambohidahy Nahavita fianianana Rabetokotany Tahiana
Feno sivy tanteraka ankehitriny ny isan’ireo mpikambana eo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC. Nanatanteraka ny fianianany tetsy amin’ny foiben’ny HCC Ambohidahy omaly Rtoa Rabetokotany Tahiana,
Fifidianana 2018 Efa mipetrakapetraka ny kajin’ny HVM
Ny 15 aprily no hikatona tanteraka ny lisi-pifidianana. Mbola manana fotoana hahafahana manamarina sy manoratra anarana ao anatin’io lisitra io izany ny isam-batan’olona.
Fandavana kandida tsy miankina Tsy ekena, hoy ny Asandratro ny tanindrazako
Avo dia avo omaly ny feon’ny filohan’ny antoko politika Asandratro ny tanindrazako nandritry ny tafa nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety tetsy amina toerana iray etsy Ambondrona (Espace Tsara vin) manoloana ny fikasana hikapa ranjo an-kolaka ireo maniry ho kandida tsy miankina amin’ny fifidianana hitranga amin’ity taona ity.
Arahabaina aloha ianao ry Jean fa dingana lehibe iny vitanao teo iny aa ! Hitako ohatry ny tena nentanentaniny be ihany nefa ianao teo. Ianareo rehetra mihitsy moa izany ee! Tena mahafinaritra leiretsy ilay hafanam-po aa!
Manao antsojay ny Prefe Mety tsy handray karama ny mpiasan’ny CUA
Nanao fanambarana, omaly, ny Sendikan’ny Mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (SMKAR), tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny, Mamy Rafanomezantsoa.
Halatra herinaratry ny JIRAMA Andoavana volabe sady mety hampigadra
Rehefa tsy ny avy eo anivon’ny orinasa Jirama na jiro sy rano Malagasy no nametraka ireo tariby mpampifandray herinaratra amin’ny trano iray, izany hoe tsy ao anatin’ny lisitr’ireo mpanjifan’ny Jirama ihany koa ary mazava ho azy, tsy manana taratasy fandoavam-bola mazava dia antsoina hoe mpangalatra jiro ianao izay.
Dr Bary Rafatrolaza “Tsy maintsy araha-maso ny voly hazo natao”
Rehefa vanim-potoana toy izao dia maro ireo sokajin`ny olona no manao ny hetsika fambolen-kazo. Madagasikara rahateo dia tsy afa-bela amin`ny fiovan`ny toetr’andro ka nametraka fanamby ny fanjakana fa handray anjara amin`ny hetsika ireo minisitera sy sampandraharaham-panjakana manerana ny nosy.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy José Rakotoharison Nampiova ny fitondran-tenako ny Rugby
Ny mpilalao taranja rugby à XV malaza eto amin’ny tanàna sady reharehan’ity taranja ity hatrany ampitan-dranomasina any no vahinin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena eto amin’ny Tia Tanindrazana anio sabotsy 10 febroary 2018.
Centre Technique National de Carion Mpiofana 25 mianadahy no notolorana marim-pankasitrahana
Mpanazatra sy préparateur physique amin’ny taranja baolina kitra niisa 25 mianadahy (vavy 1) no nisitraka ny fiofanana “préparateurs physiques” notarihan’ilay Instructeur Fifa, Michel Zitschard teratany Soisa ka notolorana sertifika mikasika izany omaly zoma,
Lalao Olimpika – Pyeongchang 2018 Atleta 2975 no hifaninana
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tany Pyeongchang,Korea atsimo ny lalao olimpikan’ny ririnina andiany faha 23.
Lainga marivo tototra
Ity fanjakana HVM ity no tompondakan’ny laza ratsy sy ny tsy fanjariana rehetra hatramin’ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Kolikoly avo lenta, afera maloto tapitr’ohatra, famarotana tanindrazana…
Fifindran’ny taksibrosy eny Andohatapenaka Mbola tena ady sy tolona
Tsy mbola hifindra eny amin’ny tobim-piantsonana vaovao eny Andohatapenaka ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena voalohany sy fahefatra ary fahenina.
Solitany eto Madagasikara Azo avadika harena be
Anisan’ny firenena manana harena be tsy hita lany i Madagasikara, na ankibon’ny tany io na any ambony. Iray amin'ireny ny solitany izay mivadika ho solika moa avy eo.
Fampiasana ny “Puces RFID” sy ny “GPS tracker” Manana tetikasa goavana ny IT University
Oniversite tsy miankina tena mamiratra amin’ny fampianarana ny tontolon’ny Informatika eto Madagasikara ny IT university eny Andoharanofotsy, ary efa namoaka mpianatra maro be mamiratra hatrany ampitan-dranomasina amin’io sehatra io.
Vatsim-pianarana mankany ivelany Firenena 4 no tena mahaliana ireo tanora Malagasy
Firenena efatra no mbola tena mahaliana ny tanora Malagasy hanohizana fianarana any ivelany ankehitriny dia i Canada, Autriche, Allemagne ary Etazonia, raha araka ny fanadihadiana natao.
Fanabeazana mampiaty Ho arahi-maso akaiky amin’ity taona ity
Nifanolotra mari-pankasitrahana noho ny fiaraha-miasa nandritra ny taona 2017 tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina, omaly, ny avy eo anivon’ny fiaraha-monim-pirenena, sehatra fanabeazana (CONAMEPT) sy ny ministeran’ny fanabeazana eto Madagasikara.
Fanabeazana Mivadibadika ny minisitra ?
Anisan’ny nampalaza ny minisitry ny fampianarana ambaratonga faharoa sy fanabeazana fototra Rabary Paul ny fahasahiany. Lasa nitombo ny mpiasam-panjakana mpampianatra (10.000 isan-taona), maimaimpoana ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana Cepe sy Bepc.
Fitsaram-bahoaka miha mahazo vahana Hampidi-doza rehefa propagandy
Toy ireny manondraka rano an-damosin’ny gana ireny ireo mpanabe, mpanao politika, indrindra ny mpitondra fanjakana sy ny fitsarana raha miteny matetika amin’ny haino aman-jery fa tsy kolontsaina Malagasy ny fitsaram-bahoaka ary habibiana tsy roa aman-tany.
Nisy namaky ny trano izay hitoeran’ny Soa Radio 96.8 ny alin’ny alakamisy teo.